Hawlgallo ammaan oo ka socda Galkacyo & bilayska oo baaraya falal danbiyeedyadii hore. – Radio Daljir
Nofeembar 19, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Nov 19 – Ciidamada ammaanka ee magaalada Galkacyo ayaa si rasmi ah u bilaabay hawlgallo ballaaran oo lagu adkaynayo ammaanka , kaasi oo ka socta xaafadaha kala duwan ee magaalada Galkacyo.
Hawlgalladaan oo badankoodu bilowday caawa ayaa si toos ah uga soconaya dhammaan gudaha daafaha magaalada iyadoo ciidanka ammaanku ay si xooggan baaritaanno ugu samaynayaa dadka iyo gaadiidka maraya waddooyinka magaalada Galkacyo.
Tallaabadaan ciidanka ammaanku ay ku adkaynayaan amamanka magaalada ayaa ka danbeeyey kadib markii dhawrkii habeen ee ugu danbeeyey gudaha magaalada Galkacyo ay ka dhaceen falal qorshaysan kuwaasi oo saraakiisha amnigu ay ku tilmaameen in looga golleeyahay waxyeelaynta nabadda Puntland gaar ahaan midda magaalada Galkacyo.
Dhanka kale ciidanka bileysku waxay ku hawlan yihiin baaritaanno la xiriira falal amni darro oo dhawr habeen ii isku dhawaa ka dhacay magaalada Galkacyo, kuwaasi oo badankooda lala bar tilmaameedsaday baro koontarool oo ay ciidanka ammaanku fariisimo ku lahaayeen.
Shir jaraa?id oo uu maantay qabtay guddoomiyaha gobolka Mudug, Axmed Cali Salaad, ayuu ku sheegay in ay gacan buuxda ku gaban doonaan ammaanka magaalada Galkacyo isla markaana ay xididda u siibi doonaan kooxaha caadaystay khalkal galinta amniga gobolka.
Guddoomiyu waxaa kale oo uu shirkiisa jaraa?id ku sheegay talo soo jeedin ku aaddanayd dadyawga ka yimid gobollada kale ee Soomaaliya isla markaana ku sugan magaalada Galkacyo gaar ahaan kuwa ay xasiloon yihiin deegaanadoodu, kuwaasi oo uu u soo jeediyey in ay ku laabtaan halkii ay ka yimaadeen si xal loogu helo mushkiladda amni darro ee gobolka, oo uu sheegay in ay qayb ka tahay culayska dadka gobolka ku soo barakacay.
Sikastaba arrintu ha ahaatee dhawrkii todobaad ee ugu danbeeyey waxaa gobolka ku soo kordhayey dhacdooyin cusub oo liddi ku ah ammaanka kuwaasi oo ay gaysanayaan dad wax-marato ah oo leh ujeedooyin gurracan.
?Wariye Isxaaq oo eedeeyey taliyaha bilayska Galkacyo & Col. Xasaasi oo beeniyey eedda wariye Isxaaq.